ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်သည် နိုဝင်ဘာ ၂၇ရက်မှ ၃ဝရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လေးရက်တာသီတင်းသုံးမည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ ဆုံသွားမည်ဖြစ်ကာ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် လူထုတွေ့ဆုံပွဲနှင့်ဆုတောင်းပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကျိုက္ကဆံကွင်းတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ ”သူရောက်မှာကတော့ နိုဝင်ဘာ ၂၇ရက်ပေါ့နော်။ ရောက်ရင် တော့ အရင်ဆုံးနိုင်ငံတော်အကြီး အကဲတွေနဲ့ တွေ့ဆုံသွားမယ်”ဟု Fr. Mariano Soe Naing က ပြောသည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည် ရန်ကုန်နှင့် နေပြည်တော်သို့ြ<ွကရောက်မည် ဖြစ်ကာ ခရီးစဉ်အတွင်း အစိုးရခေါင်း ဆောင်များ၊ ဘာသာရေးခေါင်း ဆောင်များ၊ လူငယ်များနှင့်တွေ့ဆုံ လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများအဖွဲ့ချုပ်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်သည် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဘွယ်နော့စ်အိုင်း ရက်မြို့တွင် ၁၉၃၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ရက်ကဖွားမြင်ခဲ့ပြီး အမည်ရင်းမှာ ဟောဟဲမာရီယိုဘယ်ဂေါ်လီယို ဖြစ်သည်။ စက်မှုကျောင်းမှ ဓာတု ဗေဒအထူးပြုဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ၁၃ရက်တွင်ကက်သလစ်ရဟန်းတစ်ပါးအဖြစ် ရဟန်းသိက္ခာခံယူသည်။ ၁၉၈၈ခုနှစ်တွင် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ ဘွယ်နော့စ်အိုင်းရက်မြို့၏ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၁ခုနှစ် ဖေ ဖော်ဝါရီ၂၁ရက်တွင် ရဟန်းမင်းကြီးအမတ်(ကာဒီနယ်)အဖြစ် တင်မြှောက်ခံရသည်။ ၂ဝဝ၅ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၁ခုနှစ် ထိ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဆရာတော် ကြီးများအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၃ခုနှစ် မတ်၁၃ရက်တွင် ရိုမင်ကက်သလစ်အသင်းတော်၏ ၂၆၆ပါးမြောက် ရဟန်းမင်းကြီးအ ဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ရဟန်း မင်းကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရစဉ် အီတလီနိုင်ငံ အစီစီမြို့သား ရဟန္တာဖရန်စစ် အစီစီကို စံနမူနာပြုကာ ”ဖရန်စစ်” ဟု ဘွဲ့နာမယူခဲ့သည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယအကြိမ် လူငယ်ညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ရေး မွန်ပြည်နယ်၌ဆွေးနေ
မန္တလေး မဟာမုနိ ဘုရားကြီး ပရိဝုဏ်၌ အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ သန့်စင်ခန်းမျ?
အသင်းနည်းပြ ဂွါဒီယိုလာအား မန်စီးတီး စာချုပ်သက်တမ်း တိုးမြှင့်